Dia farany | Vaovao momba ny dia
Ny fanaovana dia farany dia iray amin'ireo traikefa nahafinaritra indrindra ho an'ny globetrotter rehetra. Fitsangatsanganana mankany amin'ny toerana tsy ampoizina, na lavitra na akaiky. Iza no tsy te hisoratra anarana amin'ny zavatra toy izao?
Fa na dia fitsangatsanganana farany aza dia mila drafitra kely. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia holazainay aminao ny tetika sasany hivoaka hizaha izao tontolo izao amin'ny dia farany.
Hatramin'ny tsy ela izay, ny fomba tsara indrindra hanaovana dia toy izany dia tamin'ny sidina farany. Raha ny mahazatra dia ho tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina ianao ary mangataka tapakila fotsiny eo amin'ny kaontera fiaramanidina. Betsaka anefa ny olona mandeha amin'ny rivotra anio ka ny ankabeazan'ny sidina dia voapetraka herinandro mialoha.
Izany no antony ny zavatra tsara indrindra tokony hatao mandritra ny dia farany dia ny fanavaozana hatrany ny vanim-potoana miaraka amin'ny hetsika amin'ny tambajotram-pifandraisana amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka samihafa ary koa ny mailak'izy ireo. Ity safidy ity dia mety tsara amin'ny sidina sidina, satria matetika izy ireo dia manana seza hamenoana ary ny taratasim-baovao dia hiambina anao hatrany amin'ny varotra sidina farany.
Fomba iray hafa tsara hahitana sidina minitra farany dia ny fisoratana anarana ho an'ireo pejy hahazoana fampandrenesana ny vidiny arakaraka ny toerana tianao hisidinana. Mila misafidy sidina mahaliana anao fotsiny ianao ary hahazo mailaka miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fihenan'ny vidiny, ny fiakarana na ny fijanonany.
Hevitra iray hafa ny fikarohana fialan-tsasatra nofoanana. Izany hoe, ny masoivohon'ny fizahan-tany sasany dia mivarotra fonosana farany amin'ny fihenam-bidy lehibe rehefa tsy mankafy azy ireo ny mpanjifany noho ny antony samihafa.
Safidy hafa ihany koa ny fitsidihana tranonkala natao ho an'ny dia farany. Tsy vitan'ny hoe manome fampahalalana mahaliana momba ny sidina minitra farany izy ireo, fa milazalaza amin'ny antsipiriany ihany ny tolotra.
Ny fahalefahana ihany koa dia iray amin'ireo anton-javatra tokony hodinihina rehefa mikasa ny dia farany. Tsy ny seranam-piaramanidina ihany no manidina fa ny vanim-potoana ary koa ny toerana haleha. Amin'izany fomba izany dia ho mora kokoa ny mandamina ny diany amin'ireo toetra ireo any amin'ny tanàna izay tsy noeritreretinao akory.
Ny famandrihana sidina mialoha dia fomba iray hafa hamonjy vola rehefa mikasa ny dia farany. Ny tiana hambara dia ny zotram-piaramanidina sasany, indrindra any Amerika, manome valisoa ny mpanjifany amin'ny famandrihana mialoha ary manome kilometatra fanampiny. Raha tsy sahy mamandrika am-bolana mialoha ianao dia tsara ny mividy tapakila azo averina rehefa afaka mihena ny vidiny, raha afaka mihena ny vidiny dia azonao atao ny manafoana sy mividy azy ireo indray amin'ny vidiny mora kokoa.
Raha tsy tafintohina amin'ny tolotra tsy hay tohaina ianao izay tsy hihatsara, raha ny fahitana tambim-bidy ho fitsangatsanganana farany dia ilaina ny manao fikarohana ary mandany fotoana mitady. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanaovana izany sy ny fisafidianana ny tolotra voalohany hitantsika dia mety hidika hoe very euro be dia be, na ny mifanohitra amin'izany aza, mamonjy azy ireo.
Ny zavatra iray azonao atao dia ny manamarina maso amin'ny maso ivoho fizahan-tany azo antoka. Anontanio raha manana dia mitovy amin'ny tolotra hitanao izy ireo. Indraindray izy ireo dia afaka mahazo fampahalalana manokana izay tsy hita amin'ny fantsona hafa.
Etsy ankilany, tsy tokony hohadinointsika ny fonenana ao amin'ny drafitra famandrihana. Raha mividy tapakilan'ny fiaramanidina haingana loatra ianao ary tsy mbola nijery ny trano hipetrahana, mety ho hitanao fa tsy misy na miaraka amin'ny vidin'ny tafontrano. Noho izany antony izany, ny torohevitra tsara indrindra dia ny manamarina ny fisian'ny trano hipetrahana alohan'ny sidina. Amin'ny ankapobeny, ho mora kokoa aminao ny hanafoana ny famandrihana trano fandraisam-bahiny noho ny famandrihana sidina.
Na izany aza, raha manao izany amin'ny fomba hafa ianao, dia azonao atao ny mandinika safidy hafa hijanonana fa tsy ireo hotely nentim-paharazana: trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, trano fonenana, fifanakalozana trano, coachsurfing ...
Rehefa hizaha ny fisian'ny toerana ao amin'ny Internet ianao amin'ny minitra farany ary hitanao fa tsy manam-be izy ireo na lafo ny vidiny, dia tsara ny miantso mivantana ny hotely na trano fandraisam-bahiny. Any izy ireo mazàna dia manana fampahalalana vaovao hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Dia farany